Akuyona imfihlo ukuthi izingane eziningi zihlushwa izifo ezithathelwanayo kaningi, isimiso somzimba esingasetshenziswanga somntwana singaba "sokusola", mhlawumbe sinecala labazali, kungase kube nezinye izizathu, ngeke bakwazi ukufakwa ohlwini. Ngakho-ke, odokotela bezingane bahlale bebhekene nenkinga yokukhetha imithi, ukuphumelela nokuphepha okungenakuphikwa, futhi okungasetshenziswa ngokuphumelelayo emisebenzini yezingane. "I-Amoxicillin" yezingane ezinezifo eziningi akuyona ingozi eyenziwa yizidakamizwa. Kungenxa yeqembu lama- penicillin we- semisynthetic, futhi linomsebenzi obanzi kakhulu we-bactericidal activity. Ama-bacteria amaningi anama-gram-positive negam ayakuzwa. Ngakho-ke, "i-Amoxicillin" yezingane inqunywe ezimweni ezinjalo, uma kudingeke ukuba ubeke ngokushesha inkambo yokwelashwa kwengane, ngaphandle kokulinda ukuhlonza i-pathogen ethile.
Njengoba i-"Amoxicillin" yezingane isetshenziselwe isikhathi eside, abakhiqizi bezidakamizwa banikezela ifomu labantwana abantwana - amaphilisi ane-250 mg yesithako esisebenzayo, ugqoke ukulungiswa komlomo oqukethe ama-125 mg noma 250 mg we-amoxicillin ku-5 ml wokumiswa okuqediwe. Kulezi ziguli ezincane kakhulu kukhona i-powder yokwenza amaconsi. Amaconsi aqediwe aqukethe i-100 mg yezinto ezisebenzayo ku-1 ml yokulungiselela. Leli fomu lezidakamizwa lezidakamizwa likhishwe maduzane, elikhiqizwa yinkampani ethi "Yamanouchi Europe" ngaphansi kwegama lokuhweba elithi "Flemoxin Solutab".
"I-Amoxicillin" (ukumiswa kwezingane) ilungiswa ngokushesha ngaphambi kokusetshenziswa ngokufaka ibhodlela lapho kugcinwa khona ama-granules, amanzi abilisiwe abilisiwe alandelwa ukuzamazama. Kuvela ifomu elimnandi kunomsoco wezidakamizwa, okuyinto elula ngokwanele ukuba umthamo.
Kudingeka ukwazi ukuthi "i-Amoxicillin" yigama elingenasidingo emhlabeni jikelele, futhi kuma-pharmacy ungathenga "Khinkotsil" enkampanini "Krka", noma "Grunamox" kusuka ku-"Grünenthal" nakwabanye, kodwa zonke lezi zilungiselelo zinesithako esifanayo esisebenzayo. Phakathi kwazo zonke lezi zengane zezingane zijwayele i-amoxicillin yezingane ezivela enkampanini Yamanouchi Europe, eyaziwa ngokuthi uFlemoxin Solutab. Isidakamizwa sitholakala ngendlela yamathebhulethi anamanzi ayenzileyo, anezilinganiso zama 125 mg, 250 mg, 500 mg kanye no 1000 mg wezithako ezisebenzayo kuthebhulethi eyodwa. Futhi nguye oshiwo kaningi ngaphezu kweminye imithi, enegama elifanayo lamazwe ngamazwe.
Umkhiqizi waseRussia we-JSC "Sintez" uveza "u-Amosin", into esebenzayo efana nokulungiselela "i-Amoxicillin". Iminyaka yabantwana ibaluleke kakhulu, ngoba le mithi ikhiqizwa kuphela ngezibhebhe ezivamile futhi ingabekwa kuphela izingane ezingaphezu kweminyaka emihlanu ubudala. Kuzingane ezincane, "Synthesis" yaqala ukukhiqiza "u-Amosin" emasakeni okulungiselela ukumiswa, 125 no 250 mg ngamunye.
Isidakamizwa singabhalwa izifo ezibangelwa ama-microorganisms azizwa ezenzweni zomuthi:
• Izifo zokuphefumula (i-bronchitis, i-pneumonia);
• Izifo ze-ENT (sinusitis, sinusitis, otitis, laryngitis, pharyngitis);
• Ngezifo zohlobo lwe-urinary (urethritis, cystitis);
• Ngezifo ezithintekayo nezicubu;
Isidakamizwa uvame ukubekezelela kahle, imiphumela emibi ngendlela yokuzizwa, futhi ukuphazamiseka kokukhubazeka kuyinto engavamile kakhulu.
Isifingqo: "I-Amoxicillin" yezingane yisisetshenziswa esiwusizo, kuma-pharmacy kungaba ngaphansi kwamagama ahlukene ezohwebo. Futhi uma i-amoxicilin ngaphansi kwegama elilodwa lebhizinisi seliphelile ekhemisi ngesikhathi esithile, ummithi angase anikele ukuthenga lesi sidakamizwa ngaphansi kwegama elihlukile. Futhi lokhu akusho neze, uzama ukukuthengisa hhayi imithi, uvele ekwazi kahle futhi ngokuziphendulela ukufeza imisebenzi yakhe.
"Bobotik": imiyalelo yokusetshenziswa, izindawo zokulungiselela
Amaconsi e-Eye - eye
Kusho "i-Catadol forte". Imiyalo
Amafutha e-Neroli nezinzuzo zawo empilweni nasebuhleni
Incwadi kaSigmund Freud ethi "Psychopathology yokuphila kwansuku zonke": incazelo, izici nokubuyekeza